ယမန်နေ့ ညမှာပဲ ချစ်ရ တဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ဆုံးပါး သွား ခဲ့ တဲ့အတွက် ၀မ်းနည်း ပူဆွေးနေရတဲ့ နက္ခတ် – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ယမန်နေ့ ညမှာပဲ ချစ်ရ တဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ဆုံးပါး သွား ခဲ့ တဲ့အတွက် ၀မ်းနည်း ပူဆွေးနေရတဲ့ နက္ခတ်
ယမန်နေ့ ညမှာပဲ ချစ်ရ တဲ့ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး ဆုံးပါး သွား ခဲ့ တဲ့အတွက် ၀မ်းနည်း ပူဆွေးနေရတဲ့ နက္ခတ်
ပရိသတ်ကြီးရေ…….သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး နက္ခတ် ကတော့ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ လူသိ များအောင်မြင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်…..။ သူဟာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီး “ထာ၀ရမန္တလေး၊ အရိပ်၊ ကျွန် တော်အမုန်းဆုံး ကျွန်တော်” စတဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့ပြီး ပရိသတ် အားပေးချစ်ခင်မှုရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော်။
နက္ခတ်ဟာ ‌ရိုးရိုးအေးအေး နေတတ်တဲ့သူလေးဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယောက်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ အခု လိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ နက္ခတ်ဟာ မကြာသေးမီကတော့ သူ့ရဲ့ Facebookစာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေအတွက် ၀မ်းနည်းဖွယ် အကြောင်းအရာလေးကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
နက္ခတ်ဟာ “🙏🏻🙏🏻🙏🏻 13.5 .2021. 11:39pm ကျနော်ချစ် ရ တဲ့ အ ဖေ ကျနော် တို့ ကို ထား သွားခဲ့ ပီ အဖေ့ရဲ့ ဆုံး မ စကား တွေ နဲ့ သား ဘ၀ ကို အ ကောင်းဆုံး နေထိုင် ပါ့ မယ်။ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻…….” ဆိုပြီးရေးသားထားခဲ့တာပါ။ နက္ခတ်ရဲ့ ဖခင်ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ပရိ သတ်တွေ များစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး အားပေးစကားပြောနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက် ပါတယ်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Nat Khat’s Facebook acc
ပရိသတ္ႀကီးေရ…….သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသားေခ်ာေလး နကၡတ္ ကေတာ့ MRTV-4 ဇာတ္လမ္းတြဲေလးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ လူသိ မ်ားေအာင္ျမင္လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္…..။ သူဟာ က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကိုပီျပင္စြာသ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့သူျဖစ္ၿပီး “ထာ၀ရမႏၲေလး၊ အရိပ္၊ ကြၽန္ ေတာ္အမုန္းဆုံး ကြၽန္ေတာ္” စတဲ့ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ အားေပးခ်စ္ခင္မႈရရွိထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္။
နကၡတ္ဟာ ‌႐ိုး႐ိုးေအးေအး ေနတတ္တဲ့သူေလးျဖစ္ၿပီး အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ေယာက္ဆိုလည္းမမွားပါဘူး။ အခု လိုေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိထားတဲ့ နကၡတ္ဟာ မၾကာေသးမီကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ Facebookစာမ်က္ႏွာကေနတစ္ဆင့္ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အေၾကာင္းအရာေလးကို မွ်ေဝလာခဲ့ပါတယ္။
နကၡတ္ဟာ “🙏🏻🙏🏻🙏🏻 13.5 .2021. 11:39pm က်ေနာ္ခ်စ္ ရ တဲ့ အ ေဖ က်ေနာ္ တို႔ ကို ထား သြားခဲ့ ပီ အေဖ့ရဲ႕ ဆုံး မ စကား ေတြ နဲ႔ သား ဘ၀ ကို အ ေကာင္းဆုံး ေနထိုင္ ပါ့ မယ္။ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻…….” ဆိုၿပီးေရးသားထားခဲ့တာပါ။ နကၡတ္ရဲ႕ ဖခင္ဆုံးပါးသြားခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ပရိ သတ္ေတြ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီး အားေပးစကားေျပာေနၾကတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပး လိုက္ ပါတယ္။
သတင္းအရင္းျမစ္: Nat Khat’s Facebook acc
Previous post သူ့ရဲ့ အစ်မ ကိုယ်တိုင် ပြန်ပြီး ဖြေရှင်း လိုက် တဲ့ ပိုင်တံခွန်ထောင်(၇)နှစ် ကျတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံ
Next post အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင် အား အွန်လိုင်း ကနေ နည်းစနစ် ကျစွာ VOTING ပေးကြ ခြင်းဖြင့် အားပေး ဝန်းရံကြဖို့ တိုက်တွန်း လိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ